Roobab xooggan ayaa saaka aroortii ka bilowday Muqdisho iyo nawaaxigeeda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Roobab xooggan ayaa saaka aroortii ka bilowday ka bilowday magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda kuwaasoo ah kuwa xiligii Deyrta oo aallaaba bilowda sanad kasta marka la soo gaaro bilahan oo kale.
Roobkan oo marna xoogeysanaya marna qaboobaya ayaa saameyn ku yeeshay socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Muqdisho, waxaana wadooyinka laamiga ah iyo xaafadaha khul-khulaya biyo iyo daadad xoogan oo ka sameysmay roobabka da’aya.
Waxaa magaalada dul hoganaya daruuro madow oo roob wata kuwaasoo iftiinkii maalmeed bedelay sidii mugdi oo kale, iyadoo inta badan dadweynuhu aysan saaka ka soo bixin guryahooda roobabka oo sii xoogeyasanaya awgood.
Shacabka magaalada Muqdisho oo maalmahan dareemayey kuleyl fara badan oo habeen iyo maalin ah ayaa si weyn ugu farxay roobabkan oo ay sheegeen iney ku diirsadeen ayna dareemayaan jawi macaan iyo neecow, inkastoo maanta dad badan ay u suurageli weysay iney howlahooda qabsadaan.
Dhinaca kale, roobabkan ayaa saameyn ku yeeshay xeryaha ay ku nool yihiin barakacayaasha ku nool magaalada Muqdisho, kuwaasoo aan heysan hoy wanaagsan oo ay ka dugsadaan roobka iyo qabowga.
Qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha ayaa waxaa la soo sheegayaa iney gudaha u galeen daadad ka soo rogmaday roobka, kuwaasoo qaaday guryo ka sameysan Baco, ulo booc ah iyo cooshado markii horeba aan adkeysi badan u laheyn roobka oo ay ku noolaayeen qoysas u badan haween iyo caruur, taasoo ay dheer tahay duruufo nololeed oo horeyba u heystay.